महिलाको वक्षस्थल बारे अचम्मको केही रोचक तथ्यहरु - IAUA
महिलाको वक्षस्थल बारे अचम्मको केही रोचक तथ्यहरु
ramkrishna November 7, 2017	महिलाको वक्षस्थल बारे अचम्मको केही रोचक तथ्यहरु
महिलाहरूप्रति पुरूषहरू सहजै आकर्षित हुन्छन् । त्यसमा पनि महिलाको वक्षस्थल अर्थात् वक्षस्थलबाट पुरूषहरु झनै आकर्षित हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले गरेको अध्ययनमा प्राय पुरूषहरूको आँखा महिलाको स्तनमा पर्ने गर्छ । वक्षस्थल महिलाको सौन्दर्यको एक अभिन्न अंग नै हो यसमा दुई मत नहोला । वक्षस्थलको स्वरुपले महिलाको समग्र सुन्दरतामा प्रभाव पार्छ ।
महिलाकाे वक्षस्थलसम्बन्धी केही तय्यहरू यस्ता छन्…
1. महिलाहरुको दुई वक्षस्थल मध्ये बायाँको वक्षस्थल दायाँको भन्दा केही ठूलो हुने बताइएको छ । दुई वक्षस्थल कहिल्यै पनि एउटै साइजको नहुने अध्ययनको दावी छ । यस्तै, निप्पलको आकार पनि फरक फरक हुने गर्छ भने दिशा समेत फरक-फरक हुने गर्छ ।
2. महिलाको वक्षस्थलको वरीपरी रौहरू हुने पनि अध्ययनले बताएको छ । महिलाको शरिरको रंग अनुसार नै स्तन वरपरको रंग फरक हुने बताइएको छ ।
3. महिलाहरूको वक्षस्थलको तौल औसत ०.५ किलो ग्राम हुन्छ । अध्ययनका अनुसार महिलाहरुको वक्षस्थलमा उनीहरुको शरिरमा हुने चिल्लो पदार्थको ४-५ प्रतिशत बोसो रहेको हुन्छ । महिलाको वक्षस्थल उमेर बढ्दै जाँदा बढ्दै जान्छ र बोसोको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ ।
4. महिलाहरुले आफूलाई आकर्षक देखाउनका लागि अहिले वक्षस्थलको शल्यक्रिया गर्ने गरेका छन् । विश्वका करिब २० लाख महिलाले आफ्नो वक्षस्थलको शल्यक्रिया गरी वक्षस्थलको आकारलाई ठुलो बनाएका छन् । आफूलाई आकर्षक बनाउन या अरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि महिलाहरुले वक्षस्थलको शल्यक्रिया गर्ने गरेको बताइन्छ ।
5. महिलाहरूको वक्षस्थल सामान्य अवस्थामा भन्दा रिसाएको बेला ठुलो हुने अध्ययनकर्ताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार महिलाहरू रिसाएको बेला महिलाको वक्षस्थल समेत फुक्ने गर्छ ।
6. हिड्दा होस् या जगिङ गर्दा या त कुनै काम गर्दा महिलाहरुको स्तन बढी नै उफ्रने गर्छ । यसले महिलाहरुलाई थप स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न गराउन सक्ने बताइएको छ ।
यसले महिलालाई वक्षस्थल दुखाई समस्या बढाउने हुनाले महिलाले भित्रि वस्त्र ठिकसँग प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह चिकित्सकहरुको रहेको छ। उनीहरूले यदी भित्री वस्त्र मिलाएर लगाउने हो भने स्तनको दुखाईबाट बच्न सकिन्छ ।
7. महिलाको वक्षस्थलको आकार बिग्रिन पनि सक्छ अर्थात् अनावश्यक थेप्चिने तथा आकारमा फरक किसिमको परिवर्तन आउने हुन सक्छ, यसका लागि महिलाले विषेश गरी सुत्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्छ । सुतेको बेलामा निरन्तर एकै तरिकाले वक्षस्थल थिचिने र बारम्बार एकै तरिकाले सुत्दा स्तन एकैठाऊँमा थिचिने हुँदा पनि वक्षस्थलको आकार सोही थिचाइका कारण बिग्रिन सक्छ । त्यसका लागि महिलाले सकेसम्म कोल्टे परेर सुत्ने र सकेसम्म वक्षस्थलको तल लचिलो खाले सिरानीको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
8. महिलाको अन्तरवस्त्र बिक्रि गर्ने कम्पनी इन्टीमेसीद्धारा गरिएको सर्भेका अनुसार ४८ प्रतिशत महिलाहरु आफ्नो खास वक्षस्थलको साइज भन्दा १ वा २ इन्च ठूलो ब्रा लगाउँछन् । ८५ प्रतिशत महिलाले गलत साइजको ब्रा लगाउँछन् ।
9. इन्टरनेशनल जर्नल अफ सेक्सुअल हेल्थको सर्भेक्षणका अनुसार ७० प्रतिशत युवतीहहरु आफ्नो वक्षस्थलको आकारबाट असन्तुष्ट छन् ।
10. सन् २००६ मा गरिएको एक सर्भेक्षण अनुसार ८२ प्रतिशत युवतीहरु वक्षस्थलको स्पर्शबाटै यौन सम्बन्धका लागि उत्तेजित हुने गर्छन् ।
11. गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्का अनुसार विश्वमा सबैभन्दा ठूलो आकारको वक्षस्थल भएकी महिलाको ब्रेष्टको साइज ५.८३ फुट अर्थात् ७० इन्च रहेको छ ।
12. सन् २०११ मा अमेरिकामा २ लाख ८६ जना जना महिलाले स्तनको शल्यक्रिया गरी आकार बढाए ।
13. क्यानडामा गरिएको शोधका अनुसार स्तन प्रत्यारोपण गराउने महिलाहरुमा आत्महत्या गर्ने जोखिम ७३ प्रतिशत बढि हुन्छ ।
14. साइकोलोजी टुडे पत्रिकाले गरेको सर्भेक्षणका अनुसार गरीब पुरुषहरुले ठूलो वक्षस्थल भएका महिलालाई मन पराउँछन् भने धनी पुरुषहरुले सानो वक्षस्थल भएका महिला रोज्छन् ।
Previous Previous post: amazon का मालिक सर्वाधिक धनी
Next Next post: बिलगेट्सभन्दा धनी बने जेफ बेजोस !